Teknụzụ Smart na ọchịchị ụwa zuru ụwa ọnụ ga-echekwa ihu igwe: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 3 December 2019	• 9 Comments
isi mmalite: tgrthaber.com.tr
Ọchịchị ụwa nke Teknụzụ bụ naanị ihe ga - eme ka ịchekwaa ụwa anyị mbibi n'ihi ọdachi ihu igwe nke na - aga n'ihu anyị. Mgbe kpakpando nkiri na-akụ mgbịrịgba mkpu, ekwenyelarị ọkara nke ndị bi n'ụwa na ihe dị mkpa ka emee, n'ihi na ile anya dị mma na ịkwanyere ndị ọbịa ùgwù bụ ihe ndabere. Nwatakịrị nwanyị nwere braids na-emekwa nke ọma, dịka onye odeakụkọ dị mfe si mba ndị dị ala na-enye ndị isi ụwa ọfụfụ.
Na nna nna ochie nke nwa agbọghọ ahụ nwere braids, Greta Thunberg, ya Arrhenius utịp Okpomoku zuru uwa ma me onwe ya Onyinye Nobel dika onye chobere ihe onyinye ahu, anyi achoghi inu. 'Onye edemede ahụ dị mfe', Rutger Bregman, kpọrọ maka a kemgwucha teknụzụ Ọchịchị ụwa, anyị chere n'ezie na ọ dị mma. E kwuwerị, ọ bụ nkeji 1 maka 12, yabụ ị ga-eme ihe siri ike. Anyị ekwerela na site na ihe nkiri niile ahụ dị mma na-eme ihe nkiri na anyị ekwenyewo na nke ahụ site na onyonyo ịtụnanya na mkpochapu dị egwu. Onye dị ala adịghị ewere nsogbu ahụ nyocha ihe ndị mere eme, mana ọ tụkwasịrị obi na ndị tụkwasịrị ya obi na-egosi ihe nkiri, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị mgbasa ozi.
Na omume ọ na-agbadata na UN bụ isi ihe na - akpata nsogbu na - akpata ihu igwe na - egosikarịrị na Mwepu Mmebi gosipụtara n'ihu ọha CIA Gene Sharp (mgbanwe agba). usoro iji mee ka ndị mmadụ kwenye na anyị gaje ịnwụ. N'otu oge ahụ, ozi nke n'azụ na-agbachitere. A na-emegide ndị sayensị siri ike na ama ama, ndị nwere ike gosipụta na ụwa anaghị ekpo oke ọkụ na ya n'ihi CO2. Nke ahụ na - eme n'ụzọ anụ ahụ:
“Karịa ndị 200, gụnyere ọtụtụ ndị sayensị, na-ezo ugbu a na Germany. Abụ m otu n’ime ha. Enwere m ike ịgwa gị na m nọ na Munich, mana enweghị m ike ịgwa gị ụlọ nkwari akụ m. Enwere m ike ịgwa gị na ndị sayensị ahụ ga-ezukọ na Fraịde na Satọdee ịkekọrịta mmụta sayensị, mana enweghị m ike ịgwa gị ebee. Nzukọ a, ebe ndị ọkà mmụta sayensị ga-eweta ihe akaebe na-emegide nsogbu a na-ekwu na ihu igwe, eburu maka ọha na eze, mana ndị omempụ ihu igwe nke fasizim amanye anyị izo. Gọọmentị German jụrụ ichebe ndị sayensị na iyi egwu nke ime ihe ike. "
Nke ahụ bụ otu apụ isiokwu a, nke gosikwara ọzọ na eziokwu dị na mmetụta. N'ezie, echiche ndị dị otú ahụ ka e mepụtara ka ndị mmadụ chọpụta na o ziri ezi na a na-eji ihe ike na ọgụ. E kwuwerị, ọ bụrụ na ụwa na-achọ mbibi, yabụ echiche a, anyị ga-emerịrị onwe anyị megide ndị ahụ achọghị ịhụ ya.
Otu ndi kwere ekwe ihu igwe aghaghi ichekwa ndi mmadu n’uwa n’agha megide ndi n’ekweghi ekwe. Yabụ na anyị kpọrọ Spanish Enquisition n'isi onwe anyị na jaket ọhụrụ. Onye hụrụ udo n'anya nke chọsiri ike ịzọpụta ụwa na mberede pụtara na ọ dị njikere ịhapụ ụzọ ọ bụla. Mana hey, anyị amarala ụdị echiche ahụ na ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ anyị bara ụba, n'ihi na ọ bụrụgodị na anyị "wetara ọchịchị onye kwuo uche ya" mba ndị ahụ ọchịchị aka ike (ọgaranya), mgbe ahụ anyị anaghị egbu oge iji tụda mmanụ na bọmbụ. A bịa na ihu igwe, ndị mmadụ ugbu a na-ahọrọ maka enweghị obi ebere na oke iwe na-enweghị obi ebere. Ndị ahụ echetụbeghị ị listena ntị na ndị sayensi na-ekwesịghị ịnụ (dịka ebe amba, ha tinyere mkpịsị aka ha na ntị ma rapara n'ọnọdụ ha.
Gaghị ekwenye ndị kwenyesiri ike na ụwa ga-agwụ ma ọ bụrụ na anyị emeghị ihe ọ bụla banyere ya na ọ dị iche, n'ihi na a gwala ha na nke a bụ echiche dị oke aka nri. Ọ bụghị maka ebumnuche, kama ọ bụ naanị maka inwe obi. Onweghi otu onye n’enye uchu onodu ubochi mara ihe CO2 di n’ezie na ihe o na eme bu na o na eme ka uwa ju ebe obibi karie ooo. Ọbụna ikwughachi nkwupụta a ọzọ ebe a, enwere ike ịgụta ya, mana ọ na-eme ka ikiri ụkwụ daba na ájá ozugbo. Chọghị ịnụ nke ahụ dịka onye na-akwado ihu igwe. I kwenyesiri ike, maka na ị hụla ọtụtụ plastik na-ese n’elu osimiri, ị hụkwara polar bea na-ebelata. Ihe niile ụlọ ọrụ mgbasa ozi mere iji mee ka echiche banyere ọha mmadụ yie ihe ziri ezi na-agbasa echiche, dịkwa ka a na-agbasa echiche, ọ bụ naanị obere akụkụ na-aghọta ya. Nke a bụ n'ihi na ndị mmadụ enweghị ike ikwenye na gọọmentị na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwere ike ịgha ụgha. Ndi mmadu gakpoko onwe ha dika ihe ojoo di nma iji zoputa uwa (na ndi mmadu na anumanu na osisi).
Dị ka nke ahụ Rutger Bregman Ọ bụrụ na anyị na-ahụ ugbu a okwu maka ụdị nke komunizim n'ọtụtụ mba, mgbe ahụ anyị ga-amatakwa ụzọ nke isi ga-aga. Na isiokwu a Akọwaara m otú isi ike mmadụ na ịrị elu ụlọ ọrụ si rụpụta ọtụtụ mmadụ. N'ezie, nke ahụ tọrọ ntọala maka 'komunizim na jaket ọhụrụ'. Na England anyị ahụlarị otu Jeremy Corbyn nwere nnukwu ụlọ ọrụ chọrọ ịhụ mba ọzọ (ime obodo nwe) na n’oge na-adịghị anya anyị ga-ahụ omume ahụ ebe niile, n’ezie mgbe ọgba aghara akụ na ụba eburula ụzọ na-abịa; a ga-ata ụta ahụ nke ika ejiri nlezianya rụzie 'right' (nke jikọrọ ya na Donald Trump, Boris Johnson, Thierry Baudet, Alex Jones, Jensen, wdg).
A na-eji echiche mkpirisi kpọrọ 'ihe ziri ezi' na akara ahụ ga-ata ụta maka ihe ọ bụla, yabụ ọ na-eme ohere maka oke itinye aka na ya. Extremedị nsogbu a ga - akpụzi ya na komunizim na teknụzụ teknụzụ. Ọ ga - eduga nkwụmọtọ n'echiche niile nke na-eyi ọchịchị etiti ike. E kwuwerị, ụdị echiche ahụ akpaghasịwo akụ na ụba n'oge ahụ na echiche ahụ na-etinye ihe iyi egwu na ihu igwe.
Kedu ihe nke ahụ dị ka usoro ọrụ komunizim dị otú a? Ọ dị mma, ọ bụrụ na akụ na ụba ga-aga n'okirikiri ụwa, anyị ga-ebu ụzọ nwee oge ịda ogbenye (yabụ ọgba aghara na ụjọ). Nke a na --eme ka oghere ike maka ogwe aka ọhụrụ siri ike nke na-enye ihe ngwọta. Ọ ga-atụ anya na ka ọ dị mgbe ahụ ndị mmadụ ga-anabata ego ha na enweta ka ọ ga - egbo mkpa nnukwu ego ahụ. Usoro ego ga-akụ nnukwu ego n'oge ahụ nke achọrọ ihe ọhụụ.
Mbido zuru ezu nke usoro ego ụwa, nke dollar ahụ na-achị maka ọtụtụ iri afọ (yana nsonaazụ na US nwere ike ịchịkwa ụwa ndị ọzọ), ga-abụ ihe ngwọta. Ndakpọ akụ na ụba, ya na ọgba aghara mmekọrịta n'ihi nke a, ga-akpalite oku maka mmezi sitere n'elu. Echiche nke ọdịda nke ụwa bụ arụmụka nke abụọ na-ekwu maka itinye aka siri ike. Ha abuo ga - ewusi mkpu ike maka ike ọchịchị. Nke a ga-eji teknụzụ rụchaa ya.
Teknụzụ pụtara na enwere usoro teknụzụ nwere nhazi dị elu iji rụọ ọrụ ya ka ọ dị ugbu a. Nke a na-achọkarị maka usoro nchịkwa. Blockchain na 5G 'internet nke ihe' grid smart ga-enye uzo a. Mepụta nrụpụta ego na usoro usoro ego ụwa zuru ụwa ọnụ nwere ike iji usoro iwu ego crypto zuru ụwa ọnụ mezue. Ọ bụrụ na, na mgbakwunye, ịnwere ike ịnweta akụ na ụba na-arụ ọrụ ọzọ site n'inye ndị mmadụ ego ị na-enweta, mgbe ahụ ị ga-enwe ọnụ ọgụgụ (n'oge ahụ) ike gwụrụ n'aka gị.
Ego Crypto bara ezigbo uru mgbe a bịara n'ihe gbasara gburugburu ebe obibi. N'ime 'ịntanetị nke ihe' ị nwere ike nyochaa azụmahịa niile nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ zuru ezu. Inwere ike ịchọpụta n'otu nri ga - eme nri gburugburu ebe obibi bụ ma mezie ụtụ isi kwesiri ya.
Maka ịdị mma, ka anyị kwuo na a ga-enwe mkpụrụ ego UN, dịka ọmụmaatụ. Ego nke na-anata nkezi uru ụfọdụ n'ime ego ochie (euro, yuan, dollar, rubles). Chegodi na ochichi ohuru - nke na-abanye na ọnọdụ nke ike (n'ihi ọgba aghara akụ na ụba na nke mmekọrịta "nke ikike" kpatara - na-enye echiche nke ịtọlite ​​ụlọ akụ etiti na ịbelata ụgwọ niile wee setịpụ ego ego. Iji hapụ mkpụrụ ego UN. Onye amaala ọ bụla na-enweta 1000 UN-mkpụrụ ego ebido n’ara kwa ọnwa. A na-emegharịkwa ọnụahịa nke ngwaahịa na echekwa akụ na ụba. Akwa ụlọ ọrụ buru mba, nke mere na ha onwe ha anapụkwa ụgwọ ugwu ya na akụrụngwa akụ na ụba na-amalite ọzọ. Anyị abanyelarị n'ụdị ọnọdụ ndị Kọmunist, mana oge ahụ agaghị emetụta ya. Ọ bụrụhaala na ihe niile ga - adị ndụ ọzọ.
Ngalaba ịkwụ ụgwọ crypto ọhụrụ (dịka ọmụmaatụ mkpụrụ ego UN ka echebara ebe a) na-eme ka ihe niile dabe na oghere 5G nke 'ịntanetị nke ihe'. Ọ bụrụ na mgbe ahụ ịzụtara otu ngwungwu sịga na puku puku UN, ị bụghị naanị na ị na-ebuso gburugburu ebe obibi (nke a ga-abụ iwu), mana ọ na-emetụtakwa ahụ ike gị. Ọ bụrụ na ị ka na-ata anụ, ị na-emekwa ihe ọjọọ maka gburugburu gị, maka ehi ndị ahụ na-enweta “nitrogen” ma na ị ka - ebi ndụ anaghị eri anụ maka ahụike gị.
Enwere ike ịbawanye ụgwọ mkpuchi ahụike gị na 'ịntanetị nke ihe', n'ihi na enwere ike tụọ ihe niile ị na-eri ozugbo. A nwekwara ike itinye ụtụ gburugburu ebe obibi gị site na nguzozi ego cryptocurrency UN. N'ime ọmarịcha amamịghe ahụ, ya na igwefoto amara ihu na igwe na-ekwupụta ebe niile, enwere ike ime na mgbe ị na-ekwu n'ọfịs ụlọ ọrụ Albert, dịka ọmụmaatụ, “Ma'am, ị nwere ngwugwu chịm?“, You nata akara ntaramahụhụ ozugbo n'ihi na ị jirila 'madam'. Iwu ịkpa oke ọhụụ nke gọọmentị etiti ọhụrụ na-ekwu na nke a bụ ịkpa oke maka ndị otu LGBTI. Iszọ a na-enyocha ọha nke dabere n'ụkpụrụ otuto Sesame nke China amalitelarị webatara oge niile na Dutch football nkebi. Isi ntaramahụhụ pụtara ịbelata nzi ego nke UN.
Turkey, mba m na-akpọ kemgbe ọtụtụ afọ dị ka otu nke ga-eweghara ike na Europe maka 2023, ahazielarị ihe niile iji ewebata ego ụgha na 2020. "A na-ahazi usoro iwu mba ụwa nke blockchain di na nwunye site na Central Bank dabere na mmemme onye isi ala kwa afọ 2020, Cointelegraph kọrọ Turkey na 5 November.“Gụọnụ tupu isiokwu a.
N'ime ụwa nke teknụzụ, a na-enyocha ihe niile site na isi na teknụzụ. Teknụzụ a na-eme ka o kwe omume ịme nke ahụ na ọkwa dị oke mma. Ọ bụrụ na ndị mmadụ dị ka Rutger Bregman na-akpọ maka nchịkwa teknụzụ ma jikọta ya na ịta onye ọ bụla na-eche ihe ọ bụla banyere ihe ihu igwe, dịka ọmụmaatụ, mgbe ahụ anyị nwere ike ikwubi na teknụzụ ahụ na-eme ka ndị uwe ojii chee echiche. Usoro data buru ibu nke na-enyocha okporo ụzọ ịntanetị anyị niile, gụnyere ndị nwere ọgụgụ isi niile, ga-ama ihe echiche onye ọ bụla na-agbaso. Ọ bụrụ na anyị ejikọta nke ahụ na 'ịntanetị nke ihe', traceable ego (crypto) yana sistemụ ihe nkiri Sesame nke China, mgbe ahụ anyị na-agba akaebe maka owuwu nke teknụzụ fasizim:
Na teknụzụ ndị fascist, steeti nwere ike ịkụnye echiche ya n'ahụ ndị mmadụ webatara na ntụkwasị obi zuru oke ma nyochaa n'oge ọ bụla n'ụbọchị.
N’akwụkwọ ọhụrụ m a kọwara m etu nke a si dị adị na shelf kemgbe narị afọ ma m kọwakwara otu esi eme ya egwurugwu nọchiri anya mwepụta nke okpukpe ụwa ọhụrụ. Egwurugwu bụ akara nke ọchịchị ụwa ọhụrụ nke a ga-ewebata nke ga-ewetakwa okpukpe ọhụrụ. I nwekwara ike icheta eke na egwurugwu site na akụkọ banyere iju mmiri nke enwere ike ịchọta n'ọdịbendị na okpukpere chi dị iche iche gburugburu ụwa. Ngwurugwu ahụ nọchiri anya mgbanwe nke ụwa mgbe iju mmiri mechara kpochapụ ihe niile.
Anyị na-abịaru mgbede ụbọchị iju mmiri ọhụrụ. Ọ bụ ya mere eke na egwurugwu bụkwa akara ngosi nke mmegharị a. Mgbanwe nke mmadụ ga - eme ga --eme ka eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụụ dabere na teknụzụ. Ihe transgender transhuman n'okpuru ọkọlọtọ nke ọchịchị ụwa ụwa nke Luciferian (egwurugwu) bụ ihe mgbaru ọsọ ahụ. Ihe ọdịnihu ga-anọpụ iche na nke nwoke na ọdịnihu ga-abụ transhuman. I nwere ike chọpụta na edochaghị ya anya ugbu a ọ bụ ya mere oji dị mma ịtụle nke a. Ọ dị mkpa iburu n'uche nke a. Ọ bụ ya mere ọ bara uru ịgụ akwụkwọ m, nke m ji kọwaa ụzọ zuru oke maka ọchịchị ụwa na okpukpe ụwa wee kọwaa n'ụzọ zuru ezu ihe ebumnuche ahụ.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: obodohall.com, theguardian.com, cointelegraph.com
Tags: 5G, chinese, obodo, akwụmụgwọ, kaadị, currency, agba, okporo, internet, of, sesame, smart, teknụzụ, ihe, ọchịchị ụwa, okpukpe ụwa
3 December 2019 na 13: 39
3 December 2019 na 16: 34
3 December 2019 na 15: 00
4 December 2019 na 07: 39
Ndewo Martin, isiokwu dị mma ọzọ! Know maara mgbe na ebe ị ga-ekiri ihuman? Enweghị m ike ịchọta nke a dị mwute ikwu.
Daalụ, jisie ike!
4 December 2019 na 11: 13
Ihe m ghoro bu na a na-ebinye ihe nkiri n’ cinema nke mpaghara. Ahụbeghị m ihe nkiri ahụ n'onwe m ma buru n'uche na ọ na-egosi eziokwu ọzọ iji jee ozi dị ka ụgbụ nchekwa, mana ọ bụrụ na ịnwere ike na-abanye ya, ị ga-aga n'ụzọ.
Echere m na ọ bara uru ịgụ akwụkwọ m tupu oge eruo, n'ihi na m na-akọwa ihe dị iche na otu agbụrụ anyị si malite na adịghị mma nke ndị transhumanists. Ọzọkwa, akọwaara m ihe mere ha (ihe mgbochi na-eduzi anyị n'ụzọ a) chọrọ ka anyị jikọta anyị na AI.
3 December 2019 na 21: 27
Nkwupụta sitere na onye na-agụ na Facebook:
A tụgharịrị SMART na 'smart' na NL. Agbanyeghị, ọ bụ mpebiri okwu maka ihe dị iche kpamkpam: "Nzuzo Ndị agha na mpaghara obibi".
Na Dutch, "ngwa agha nzuzo na gburugburu”
3 December 2019 na 21: 57
Ọ bụ Jennifer Morgan sitere na Greenpeace na-ahụ maka Greta Thunberg, onye ya na Al Gore (Onye mepụtara ihe zere kpamkpam, akwụkwọ akụkọ ụgha zuru oke 'Eziokwu na-adabaghị adaba') na World Economic Forum na Davos. "Greenpeace ji ego Greta, na ndị nyere onyinye ha nwere ndepụta dị ogologo nke ndị na-elekọta mmadụ. Greta pụtara na Alberta, Canada, ụbọchị abụọ tupu ntuli aka ahụ, na-agwa ndị mmadụ na n'ihi mgbanwe ihu igwe, ha ga-ahapụ ọrụ ha. "
Greenpeace bụ NGO nke webatara egwurugwu dị ka ihe nnọchianya n'ụwa niile. N'akwụkwọ m a kọwara ihe kpatara egwurugwu bụ akara nke ụwa ọhụụ ụwa, ọ kwesịrị iduga anyị na njikọ nke AI.
Nabata na igwe (bụrụ abụ Pink Floyd).
4 December 2019 na 11: 12
4 December 2019 na 11: 18
Ehee, ndi otu a ka na - achotacha m ... okwu siri ike.
Ọzọkwa, aha ahụ dị mkpa. Ha ahụworị na ‘igwe’ na-alụ ọgụ n’onwe ya.
" Rutger Bregman kpọrọ oku maka ọchịchị onye isi ọchịchị UN
Mara akụkọ ihe mere eme iji ghọta usoro UN XX XX »
Nleta nile: 15.974.916